SOOMAALIYA WAXAY ISKULA JOOGTAA DHIIGA MUDANE CABDULRAXMAN CABDISHAKUR WARSAME |
SOOMAALIYA WAXAY ISKULA JOOGTAA DHIIGA MUDANE CABDULRAXMAN CABDISHAKUR WARSAME
Marka hore waxaan rabaa in aan si cad cadeeyo in GABOOD-FALKII lagula kacay Cabdulraxman Cabdulshakur Warsame (December 17, 2017) in uu GABOOD-FAL laga galay Qaranka iyo Dowladnimada Soomaaliyeed. In SAQ-DHEXE loo dhaco aqal ama guri uu degan-yahay Muwaadin Soomaaliyeed, ka dibna la GUMAADO muwaadiniintii aqalkaas ku noolaa maahan danbi laga galay oo kali ah muwaadiniintii la xasuuqay ee waxaa JARIIMO laga galay Qaranimada iyo Dowladnimada Soomaaliya, sababta oo ah: Dastuurka Ku-Meel Gaarka ee la ansixiyay (August 1, 2011), Qodobka 19aad: Xurmada Hoyga waa ku qoran sidaan:
1. Qofna gurigiisa ama meeshii kale ee isaga u gaar ah lama geli karo, lama baari karo, lamana basaasi karo amar garsoore oo sababaysan la’aantiis, 2. waxaa waajib ah in amarka garsooraha si toos ah loogu akhriyo degaganaha hoyga, baarahana waxaa ka reeban ku xadgudubka sharciga, (eeg Dastuurka Ku- Meel Gaarka ah, Qodobka 19aad, eeg boga 9).
Mudane Cabdulraxmaan Cabdulshakur Warsame lagulama dhaqmin Xeer Qaran iyo Garasho caqli saliim ah e waxaa lagula dhaqmay Xeerka Duur-Joogta. Asal ahaana lamaba tix-gelin (danbi iyo danbi la’aanba), in Mudane Cabdulraxman Cabdulshakur Warsame in uu yahay MUWAADIN SOOMAALIYED, kana mid ah dadka Soomaaliyeed ee leh XUQUUQ lagu ilaaliyo Dastuurka Soomaaliya. Xuquuqdii Mudane Cabdulraxman waxaa ku xad gudbay qaarka ka mida Dadka Soomaaliyeed ee magac iyo maamuusba ku leh Dastuurka, balse NASIIB DARO ku tuntay Dastuurka Dalka. Mudane Cabdulraxam Cabdulshakur Warsame NASIIB DARO ma helin xuquudii Dastuurku siiyay, waxaana si cad ugu gabood-falay oo waliba si cad ugu xad-gudbay Xuquudiisii Muwaadinimada kuwii KU-DHAARTAY KITAABKA ALLE in aay si siman u ilaalin-doonaan Dastuurka Qaranka iyo Xuquuqda Muwaadiniinta Soomaaiyeed.
UJEEDADA QORAALKAANI WAA:
Ujeedada qoraalkaani waa in TAARIIKHDA SADARADEEDA LAGU CADEEYO: in Alle Mahadiis e, in Soomaali iskula joogto DHIIGA Mudane Cabdulraxman Cabdulshakuur Warsame. Waana in qofkasta oo Soomaali ah ogaado in Soomaali iskula joogto DHIIGA Mudane Cabdulraxman Cabdishakur Warsame.
SU’AAL IYO JAWAAB:
Maxaa looga jeedaa Soomaaliya waxay iskula joogtaa DHIIGA Mudane Cabdulraxman Cabdulshakur Warsame?
In su’aashaas si sax ah looga jawaabo waxay u baahan-tahay in la garab-dhigo su’aal kale si jawaabta ku haboon looga jawaabo su’aashaan: Sidaas darteed aqristaha waxaan u soo jeedineynaa su’aashaan:
Tusaale ahaan ka soo qaad: In Mudane Cabdulraxmaan Cabdulshakuur Warsame loo-dooran lahaa Madaxweynaha Soomaaliya Bishii Febraayo 8, 2017 ka, hase yeeshee Cabdulraxman asaga oo fadhiya Madaxtooyada Soomaaliya diidmo ama MUCAARIDNIMO ugu imaam laheed Xubin ka mida kuwii kala qeyb-galay Tartan-ka Madaxweynanimada. Bal ka waran hadii dhacdo in Mudane Madaxweyne Cabdulraxman asaga oo ka faa’iidaysanaaya AWOODA QARAN-ka, in uu SAQ-DHEXE ku qaado duulaan ciidan guriga ninkii kula tartamay Hogaanka Dalka. Ciidamada Qaran-kana ayaga oo fulinaaya amarka Talihooda Sare (Madaxweyne Cabdulraxman), si ula kac ah u GOWRACAAN dhamaan ilaalada Madaxweyn u Tar-tamaha, isla markaasna la aaso ayaga oo aan la marsiin maamuuskii qofka Muslim-ka ah ee maydka ah xaq u lahaa sida la dhaqo laguna dukado Salaatul Janaasa. Dhanka kale-na Madaxweyne u tar-tamahii laftigiisa asaga oo dhaawac ah oo xabu-ku taalo, dhiigiisuna ka daadanaayo hadii sida JAWAAN GALAY ah baarbuur ciidan lagu tuuri lahaa, ka dibna Xabsiga la dhigi lahaa, Soomaaliyey adinka oo Alle ka baqaaya subaxdii maxaa ka dhici lahaa?
Waxaan qiyaasayaa in qof kasta oo Soomaali ah oo wax-garta in jawaabtu u cadahay, hada Alle Mahadiis, Soomaaliya waxay ku bad-baaday DHIIGA Mudane Cabdulraxman Cabdulshakuur Warsame. Waxaa xaqiiqo ah hadii dhibaatada dhacday Cabdulraxman gaysan lahaa saakayto xaalka Soomaaliya si kale in uu ahaan lahaa caad igama saarna. In subaxdii la isku habar wacan lahaa waa muuqataa.
BIYO DHACA QORAALKA
Hada wixii ku dhici Mudane Cabdulraxman Cabdulshakuur waa ku dhaceen, balse waxaa lama huraan ah in HOOSTA LAGA XARIIQO 7 arimood oo muhiim ah isku soo dumida ama isku keenida ummada Soomaaliyeed waana:
1. In la aqbbalo lana qiro in Mudane Cabbdulraxman in lagu gabood-falay waliba si weyn, sababta oo ah Cabbdulraxman ma waayin oo kali ah XAQII IYO XUQUUQDII MUWAADINIMADA ee Cabdulraxman wuxuu waayay DAMIIRKA UMADDA SOOMAALIYEED, gaar ahaan Culuma’udiinka, Hogaan-ka Dhaqanka, Aqoonyahana, Ganacsatada, iyo Baarlamaanka Soomaaliya oo waajibkiisa kowaad yahay ilaalinta Sareeynta Sharciga. Waxgaradka bulshada waxaa WAAIB ku ahaa in aay garab-istaagaan Cabdulraxman sababta oo ah Cabdulraxmaan ma ahayn muwaadin caadi ah ee wuxuu ahaa Muwaadin HANKIISA IYO DAREENKIISU gaarsiis-naayeen in uu shaqeeyo Diintiisa, Dadkiisa iyo Dalkiisa ama in uu Dalkaan Madaxweyne ka noqdo, waana mudan yahay.
2. In qofkasta oo Soomaali ah ogaado qiimaha dhiiga Cabdulraxman Cabbdulshakuur sababta oo ah DHIIGIISA ayaa la iskula joogaa, waana in lagu qadariyaa oo waliba looga mahadnaqo.
3. In laga digtoonaado isla markaasna aaysan dib-danbe u dhicin dhacdadii WAXASHNIMADA aheed ee lagula kacay Mudane Cabdulraxman Cabdishakur Bishii December 17 keedii ee sanadkii 2017kii.
4. In Cadaalda la horkeeno cidii ama qofkii bixisay AMARKII lagu weeraray guriga Mudane Cabdulraxman Cabdulshakur Warsame, eeda kaliya ee loo haysto AMAR-BIXIYAHA waa in uu cadeeyo ama soo bandhigo SHARCIGA u ogolaaday in uu guriga Mudanaha ku qaado weerarkaas GABOOD-FALKA xambaarsanaa. Ujeedadu waa in Cadaalada la sugo kaliya. Mana jirto cid-gaara oo ujeedo gaara laga leeyahay. Tusaale ahaan: Hadii Cabdulraxman ahaan lahaa eedeysane ku eeydaysn daadinta dhiiga muwaadiniinta sidii loo marsiin lahaa cadaalada si la mid ah waa in cadaalada loo marsiiyo kuwa ka danbeeyay masiibadii dhacday.
5. In la isla meel-dhigo in weerarkii GABOOD-FALKA ahaa ee lagu qaaday guriga Mudane Cabdulraxman Cabdulshakur Warsame in uu ahaa weerar LIDI ku ahaa Qaranimada iyo Wadajirka Ummada Soomaaiyeed sababta oo ah weerarkaasi wuxuu garab marsanaa Dastuurka Qaranka wuxuu KHATAR CAD ku ahaa Wada-noolaanshaha Bulshada. Ma jirto cid aqbalayska isku- adeegsi awood dowladeed oo ka baxsan xuduuda iyo nuxurka Dastuurka Ku-Meel Gaarka ah ee Jambuuriyada Federalka ee Soomaaliya ee la ansixiyay (Agoosto 1, 2012), Qodobkiisa 19aad ee “Xurmada Hoyga”, eeg boga 9aad. Cidii ama qofkkii bixiyay AMARKA lagu weeraray hoyga Mudane Mudane Cabdulraxman wuxuu hareermaray Dastuurka Qaranka Qodobkiisa 19aad, waa qodobka qeexaaya xuquuda iyo xurmada degaanka muwaadinkasta ee Soomaaliyeed.
6. In si gaara loogu mahad-noqo, wax-garadkii (intii yareed) ee USHA-DHEXDA ka qabatay Soomaaliya-na ku badbaadisay DHIIGA Mudane Cabdulraxman Cabdulshakur Warsame.
7. In la la ogaado in qofku in uusan ahayn denbiile ilaa iyo inta aay dacwadiisa qaadayso Maxkamad Caadil ah, Maxkamad Qaaliga iyo Kaal-Kaaliyaashiisu ku shaqayneyn amar meel kale ka yimid ama aan laaluush ku shaqayn.
Ujeedada Qoraalkani waa mid cad ama leh ujeedo kooban, waana in SADARADA TAARIIKHDA lagu qoro in Alle Mahadiis, in Soomaali iskula joogto DHIIGA Mudane Cabdulraxman Cabdulshakur Warsame. Qofkii horay u ogaa in Soomaali Alle ku furtay DHIIGA Mudane Cabdulraxman waa ku mahadsan-yahay qofkii aan horay u ogeena waa in uu hada ogaado. Sababta oo ah XAQIIQO DHAB AH.
SOOMAALIYA HA GUULEYSATO: AAMIIN
FIIRA GAARA: Qoraalkaan looguma tala-gelin dadka intiisa caadifadaysan ee waxaa loogu tagagalay oo kali ah inta wax garata, ama inta aay ka go’antay in Diinta, Dadka, iyo Dalka Soomaaliyeed in dib loo-mideeyo. Soomaaliya waa isku baahan-tahay ee yaan lakala geyn.
Hassan Sheikh Ali Nur (Dr. Imaam).